Echegbula. Oge ahụ agaghị abụ nke ziri ezi. - Napoleon Hill - na-ekwu okwu Pedia
Iche icho bu otu n’ime ihe akacha n’iru mmadu. Dị ka ụmụ mmadụ, ọtụtụ n'ime anyị na-eche ichere ruo mgbe ọnọdụ anyị dị mma ga-eme. Maka nke a, anyị na-ahọrọ karịa maka oge kwesịrị ịbịa. Ma otodi, ihe di nkpa ị ghaghi ighota nke ahu oge kwesịrị agaghị eme eme.
Onweghi ụdị ihe a na-akpọ oge kwesịrị ekwesị. Ikwesiri ikwuputa na ihe obula ị na-ezube ime, ị gha eme ya ugbu a. Ma ọ bụ ihe ọzọ, ọ ga-anọ ọdụ. Yabụ, ihe kachasị mma ị nwere ike ime abụghị ichere.
Anyị maara na ị nwere ụfọdụ atụmatụ n’ime ndụ gị. You na-echekwa oge kwesịrị ekwesị iji mezuo atụmatụ gị. Mana, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba àmà nke ọma na ị nweta atụmatụ gị, ị ga-ebido ugbu a.
Ma eleghị anya, ọ ga-eji ntakịrị oge, mana nsonaazụ ga-amịpụta mkpụrụ. Ọzọkwa, ichere ihe agaghị abara gị uru ọ bụla, belụsọ na-egbu ụfọdụ n'ime oge gị dị oké ọnụ ahịa. Ọ bụrụ n’ị na-ewepụta oge, ị gaghị enwe ike nweta ihe ịga nke ọma ị chọrọ na ndụ gị.
Yabụ, ọ bụ oge ị ga-amalite nraranye zuru ezu. Anyị na-ekwe gị nkwa na ị gaghị eru ebumnuche gị n’oge adịghị anya.
Emelafusị Ihe Oge Gị
Ihe Edere Ama
Otu banyere oge na mgbanwe
Oge njikwa oge
Uru Oge Kwuru
Ọ bụ eziokwu n'eziokwu na ị ga - emeri kachasị mma na ngwa ngwa site n'inyere ndị ọzọ aka ịga nke ọma. - Napoleon Hill
Ọ bụ eziokwu n'eziokwu na ị ga - emeri kachasị mma na ngwa ngwa site n'inyere ndị ọzọ aka ịga nke ọma. - Napoleon…
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ime nnukwu ihe, rụọ obere ihe n'uzọ dị ukwuu. - Napoleon Hill
Ọ baghị uru ịme ihe ukwu iji nwee ihe ịga nke ọma. Ndị na-eme nke ọma enwetarala ihe ịga nke ọma na…
Mmalite nke mmezu niile bụ agụụ. - Napoleon Hill
Ọchịchọ bụ mmetụta siri ike nke ịchọ inweta ihe. Ọchịchọ na-ezo aka n'ọchịchọ maka ihe…
Echiche ziri ezi bu echiche ziri ezi. - Napoleon Hill
Ohere na-abụkarị ihe nlere anya n'ụdị ọdachi, ma ọ bụ mmeri nwa oge. - Napoleon Hill
Ohere na-abụkarị ihe nlere anya n'ụdị ọdachi, ma ọ bụ mmeri nwa oge. - Napoleon Hill kwuru si: